Idaacada Sverige qeybta Af-Soomaaliga oo dacwadii laga dhaafay | Somaliska
Idaacada Sverige qeybta Af-Soomaaliga oo dacwadii laga dhaafay
Sidii aan dhowr isbuuc ka hor soo qornay idaacada Sweden (SR) qeybteeda afka Soomaaliga ayaa la dacweeyay ka dib markii uu wadaad Soomaali ah dood ay qabteen idaacada ku baaqay in la dilo dadka diinta Islaamka ka baxay. Hadaba xeer ilaaliyaha cadaalada (Justitiekanslern, JK) ayaa go’aamiyay in aan loo baahneyn in la baaro dacwada idaacada maadaama uu wariyaha kula dooday wadaadka hadalkiisa.
Dacwada ayaa waxaa gubdiyay nin lagu magacaabo Erik Johansson oo ka tirsan kaniisad kaasoo sheegay in asxaabtiisa Soomaalida ah ay u turjumeen hadalkii wadaadka ka socday masaajidka Rinkeby Stockholm. Ninkaan ayaa dalbaday in idaacada lagu soo oogo dambi naceyb ah. Idaacada ayaa markii la dacweeyay waxay ka saareen barnaamijkii bogooda.
Dooda ay qabteen idaacada SR ayaa ka dambeysay ka dib markii niman Soomaali ah oo diinta ka baxay ay bandhig ku qabteen xaafada Rinkeby ee Stockholm kuwaasoo ku baaqay in Soomaalidu ay diinta Kiristaanka qaataan.
Cunsurigii ugu weynaa UK iyo kuxigeenkiisa oo isaga baxay ururka EDL
markii horaba waxa qaldanaa inla dacweyo idacada nimanka somalida ah ee u turjumaya afsomaliga ajnabiga ayaa qaldan iyagane maxan ka fa idayaan in aay ajnabi ku doorsadaan somalinimadooda somali alah soo hanuniyo
Asc. Walaalayaaloow waxaan ka yaabaa markay reer galbeedku dimoqraadiyada ka dhigaan la jiifiyaana banaan. Markaan sidaan idin leeyahay bal ila arka ninkan kaniisada ka tirsan ee la leeyahay Erik Johansson waxuu ku leeyahay idaacada halagu soo oogo dembi nacayb ah. Markii ninka Lars lalahaa uu Nabi Muxamed(Scw)aflagaadeeyay waxay lahaayeen waa xor qofku inuu fikirkiisa cabiro maxaa u diidaya wadaadka soomaaliga ah inuu diintiisa xor u noqdo?.
Walaashey Ramlana waxan kuu sheegayaa kuwa u tarjumay ninkan waa qola asaga xertiisa ah oo waaba kuwa dadka ugu baaqaya iney diinta ka baxaan markaa Soomaalinimada aad sheegeysaba wax ka galay ma lahan. Ugu danbeyntiina Ilaahay dhulkeena nabad hanooga dhigo asagaan xor ku ahaaneynaa dushiisa inshaa Allaah kuwa naga baadiyoobeyna Allaha soo hadeeyo dhammaanteena Allaha na xifdiyo asagaa awood badane.